इन्डियन काउन्सल फर सोसल साइन्स रिसर्चका अध्यक्ष तथा इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ दलित स्टडिजका संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेका प्रोफेसर सुखदेव थोराठ मूलतः अर्थशास्त्री हुन् । उनले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएच्डी गरेका हुन् । उनी
सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसवीच अहिले कुनै पनि विषयमा सहमति बन्न सकेको अवस्था छैन । संसदीय सुनवाई समितिदेखि विभिन्न विषयहरुमा उनीहरुवीच मतभेद छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनि चलेको बहसमा समेत
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता डा. प्रकाशशरण महतसँग नयाँ सरकार गठन, सरकारको नेतृत्व लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
भूकम्पपछिको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक भइरहेको र दाताहरु पनि खुशी रहेको दाबी गरेेका छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको चार महिना बितिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई अनुभूत हुने गरी काम गर्न नसक्ने हो भने छुट्टी लिनुपर्ने बताउँदै गिरीले अनलाइनखबरसँग भने- नेपाली जनता रोइराखेका छन् । चुल्हो बन्द भइराखेको छ । ग्यास अभाव छ । तेल अभाव छ । महंगी छ । भ्रष्टाचार छ । तर, यसमा
जनआन्दोलन भएको थियो । र, फेरि हुन्छ । अर्को कुरा के भने मधेस मात्र होइन, पहाडको मगरात, तामाङ, लिम्बुवानको सोच के बन्दै गएको छ ? उनीहरुले आप्mनो अधिकार खोज्दै गएका छन्, प्रदेश खोजेका छन् । मधेस एक्लो छैन । अहिलेको सरकारले मुलुकलाई इथ्निक
संसदको बैठक बस्नु अगाडि नै संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग बार्ता गरेर थारु आन्दोलनकारीहरुलाई पनि संबोधन हुने गरी एउटा सम्झौता गर्ने विन्दुमा पुग्नकोलागि सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने र त्यसको निम्ति सबै तयारीहरु गर्ने भनेर हामीले निष्कर्स
पूर्वमहान्यायधिवक्ता युवराज संग्रौला अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता हुन् । राष्ट्रियताका पक्षमा प्रष्ट विचारहरु अभिव्यक्त गर्ने संग्रौला यतिबेला भारतीय नाकाबन्दीलाई लिएर भारतको कटु आलोचना गरिरहेका छन् । संग्रौलासित नाकाबन्दीकै सेरोफेरोमा
मधेशका साथसाथै पहाडको पोखरा, लम्जुङ्ग, इलामलगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि मस्यौदाको विरूद्धमा जनताहरू सडकमा उत्रिए । यो जुन मस्यौदा ल्याइएको छ, यो संविधानसभाले तयार गरेको पनि होइन । चार जना एउटै जातिका मान्छेहरू बसेर बालुवाटारमा राति १२ बजे
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा एमालेसँग पौंठेजोरी खेल्दै चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर भर्खरै अवकाश पाएका युवराज लामाको अनुभवमा यो पदका लागि पैसावाल मानिसले एक/दुई करोडसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् । आखिर के ग्ल्यामर...
नेपाली युवा धेरै काम गर्न जाने प्रमुख रोजगार गन्तव्य मध्येको एक संयुक्त अरब इमिरेट्सको (युएई) आबुधाबिस्थित नेसनल क्याटरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारेक एल गुयनी नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत कारमदारका परिवार
सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन डाकेको छैन । संसदीय समितिहरुमा सरकारका प्रतिनिधिसहित संलग्न भएर बजेटलाई अगाडी सार्ने तथा बैसाखमै ल्याउने बहस भइरहेका छन् । तर कात्तिक २३ गते स्थगित भएको वर्षे अधिवेशनपछि एक महिना भित्र बोलाउनुपर्ने हिउँदे
संविधान जारी गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा दलहरूबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन् । संविधान समयमा नआउने देखेपछि संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सोमबारसम्म दलहरूलाई सहमति गर्न या आफूलाई मस्यौदा तयार गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । उनले संविधान